Blurtooth a BT vulnerability na-enye ndị hackers ohere ijikọ na ngwaọrụ ndị dị nso | Site na Linux
A na-adịbeghị anya mara vulnerability na ọkọlọtọ ikuku Bluetooth nwere ike ikwe ka ndị hackers jikọọ na ngwaọrụ remotely na mpaghara ụfọdụ ma nweta ngwa ndị ọrụ.
Nsogbu ahụ, akpọrọ Blurtooth, kọwara ya ụbọchị ole na ole gara aga site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Bluetooth SIG nke na-ahụ maka mmepe nke ọkọlọtọ. Ma ọ bụ na Bluetooth ka a hụrụ na ọtụtụ ijeri ngwaọrụ gburugburu ụwa, site na smartphones ka IoT ngwaọrụ "Internet nke ihe".
Nsogbu nke Blurtooth Ndi nyocha sitere na EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne choputara ya na Mahadum Purdue nke Switzerland.
N'ime ụwa nke teknụzụ ndị ahịa, a na-ejikarị ya eme ka njikọ dị mkpụmkpụ maka ọrụ dịka ijikọ ekweisi ikuku na ekwentị.
Mana Bluetooth na-akwado nnyefe data dị ogologo karịa site na ihe ruru ọtụtụ narị ụkwụ, nso nke ndị na-agba ọsọ nwere ike iji Blurtooth malite ịwakpo mwakpo.
Mgbawa ahụ na-eji adịghị ike n'ụzọ Bluetooth gosipụtara nchebe nke njikọ.
Dịka, onye ọrụ ga-eji aka ya kwado arịrịọ njikọ tupu njikọta ngwaọrụ ha na sistemụ ọzọ, mana Blurtooth na-ekwe ka agbachitere agbachitere a.
Ebe obu onye hacker ma obu onye nwere ihe omuma zuru oke iji na-erigbu ndị vulnerability nwere ike hazi obi usoro iji ersonomie ngwaọrụ Bluetooth na onye oru nwere ugbua kwadorodị ka ekweisi ekwe ntị ha na ịnweta ngwa ndị enyere Bluetooth na igwe ọrụ.
Mwakpo nke Blurtooth dabeere a-wuru na-Bluetooth nche atụmatụ mara dị ka CTKD. Nọmalị, ọrụ a ọ na-eji na-enyere encrypt njikọ. Mana enwere ike iji ya mee ihe iji nweta igodo nyocha maka ngwaọrụ akwadoro, nke bụ ihe na-eme ka o kwe omume ị nweta isi njedebe ziri ezi wee si otú a gbochie mkpa onye ọrụ iji kwado njikọ na-abata.
Igwe ikuku na-enweghị eriri nke Bluetooth na-ebelata ihe egwu dị na nsogbu. Mbipụta abụọ nke teknụzụ emetụtara, Low Energy na Basic Rate, naanị na-akwado njikọ gafere anya ruru ihe dịka 300 ụkwụ. Mana nkwado zuru oke maka mbipụta abụọ nke Bluetooth a na ngwaọrụ ndị na-azụ ahịa pụtara na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ nwere ike ịdị nfe.
Lọ ọrụ ahụ maka Bluetooth SIG kwuru na ụfọdụ nke ngwaọrụ site na iji nsụgharị Bluetooth 4.0 na 5.0 na-emetụta. Ntughari nke 5.2 kachasị ọhụrụ, nke na-abanyebeghị ebe niile, o doro anya na ọ bụghị ngwangwa, ebe mbipute 5.1 nwere ụfọdụ atụmatụ arụnyere na ndị nrụpụta ngwaọrụ nwere ike ime ka ha gbochie ọgụ nke Blurtooth.
Na nche ozugbo, Bluetooth SIG O kwuru na ọ "na-ekwupụta ọtụtụ ebe" nkọwapụta nke ngwangwa nke ndị na-eme ngwaọrụ iji mee ngwa nzaghachi ụlọ ọrụ ahụ. Ndị otu a "na-agba ha ume ka ha jikọta ngwa ngwa ndị dị mkpa." Amabeghị mgbe patch ga-adị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ga-achọ ha.
Bluetooth SIG weputara nkwupụta na Fraịde:
Ọ ga-amasị anyị ịnye nkọwa ụfọdụ na ngwangwa BLURtooth. Nkwupụta ihu ọha mbụ nke Bluetooth SIG gosipụtara na ndagide ahụ nwere ike imetụta ngwaọrụ site na iji nsụgharị 4.0 gaa na 5.0 nke nkọwapụta isi Bluetooth.
Otú ọ dị, nke ahụ edozila ugbu a iji gosipụta naanị nsụgharị 4.2 na 5.0. Ọzọkwa, nsogbu BLURtooth adịghị emetụta ngwaọrụ niile site na iji nsụgharị ndị a.
Iji nwee ike imeghe ịwakpo, otu ngwaọrụ ga-akwado BR / EDR na LE n'otu oge, na-akwado mbupute ụzọ na-ebugharị ụzọ, yana na-eme ka ndị mmadụ na-elele ma nweta igodo ha n'otu ụzọ. A kọwara ihe ngwọta maka nsogbu a na Nkọwapụta Ntọala Bluetooth 5.1 na mgbe e mesịrị, na Bluetooth SIG akwadoro ndị otu nwere ngwaahịa na-adịghị ike ka ha tinye mgbanwe a n'ime atụmatụ ochie, mgbe enwere ike.
N'ikpeazụ ọ na-kwuru na ọrụ nwere ike na-esochi ma ha ngwaọrụ natara a kwachie maka BLURtooth ọgụ site ịlele femụwe na sistemụ ntọhapụ ndetu CVE-2020-15802.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Blurtooth a BT nke na-eme ka ndị na-agba ọsọ jikọọ na ngwaọrụ ndị dị nso
Manjaro Linux 20.1 bịarutere na Kernel 5.8, mmelite gburugburu na ndị ọzọ